दक्षिणपन्थी सरकारको वामपन्थी बजेट - Karobar National Economic Daily
दक्षिणपन्थी सरकारको वामपन्थी बजेट
query_builderFebruary 13, 2017 10:58 AM supervisor_accountडा. गोविन्दबहादुर थापा visibility909
नेपालले यो वर्षको पहिलो पाँच महिनामा भारतबाट प्रतिमहिना ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मूल्यका चामल, तरकारी, फलफूल र जीवित जनावरजस्ता आधारभूत कृषि उत्पादन आयात गरेको छ ।
गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो आयात ४५.२ प्रतिशतले बढी छ । गत वर्ष भारतीय नाकाबन्दीबाट यी वस्तुको आयात कम प्रभावित भएको थियो । त्यसैले यो ४५.२ प्रतिशतको आयात वृद्धि उल्लेखनीय हो ।
नेपालका निमित्त प्रमुख कृषि उत्पादनमा यस किसिमको बढ्दो परनिर्भरता चिन्ताको विषय हो । यसको प्रमुख कारण नेपालको कृषिक्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षा गर्नु र भारतीय कृषिक्षेत्रलाई त्यहाँको सरकारबाट प्राप्त अधिक र बढ्दो सुविधा हो ।
भारत सरकारको प्रत्येक वर्षको बजेटले कृषिक्षेत्र, किसान र ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा विशेष रूपमा जोड दिँदै नयाँ–नयाँ सेवासुविधा थप्दै गएको छ । त्यसबाट किसानहरू उत्पादन बढाउन उत्प्रेरित भएका छन् ।
त्यस्ता सेवा सुविधाकै कारणले ती उत्पादन सस्तोे भई तिनको आन्तरिक खपत र निर्यात पनि बढ्दै गएको छ । जब कि नेपालको कृषिक्षेत्र सरकारको चरम बेवास्ताको सिकार भएको छ ।
नेपालमा त अर्थतन्त्र कहिल्यै चिन्ता र चासोको विषय बनेको छैन । नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई गम्भीर ढङ्गले प्रभाव पार्दै आएको भारतको बजेट कतै पनि चासोको विषय नबन्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
फेरि पनि त्यो बजेटले हाम्रो अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर त पारि नै हाल्छ । त्यसैले यस आलेखमा १ फेबु्रअरी २०१७ मा भारतीय अर्थमन्त्रीले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्रमुख विशेषताका के हुन् त ? जान्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
भारतमा अहिलेसम्म प्रत्येक वर्षको फेब्रुअरी २८ मा बजेट पेस गर्ने गरिएकोमा यस पटक एक महिना अगाडि सारेर १ फेब्रुअरीमा पेस गरिएको छ । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै संसद्बाट बजेट पारित गरी पूरै वर्ष बजेट कार्यान्वयन गर्न यसो गरिएको भनिएको छ ।
भारतको यो बजेटले सन् १९२४ देखि अभ्यास हँुदै आएको भारतीय रेल्वेको छुट्टै बजेट पेस गर्ने परम्परा यसपटकदेखि अन्त्य गरेको छ । यो वर्षदेखि रेल्वेको आय र व्ययसमेत गाभेर एउटै सिङ्गल बजेट बनाउने परम्परा सुरु गरिएको छ ।
त्यसैगरी बजेटमा सुरुदेखि नै प्लान र नन–प्लान एक्स्पेन्डिचर शीर्षक दिएर खर्च विनियोजन गर्ने गरिएकोमा यो बजेटले त्यो व्यवस्था पनि खारेज गरी राजस्व खर्च र पुँजीगत खर्च शीर्षक दिएर बजेट विनियोजन गर्ने परम्परा सुरु गरेको छ ।
बजेट ग्रामीण विकास, पूर्वाधार र गरिबी न्यूनीकरणमा विशेष रूपमा केन्द्रित देखिन्छ । त्यसअन्तर्गत शासन प्रणाली र जनताको जीवनस्तर सुधार तथा देशबाट भ्रष्टाचार, कालो धन र अपारदर्शी राजनीतिक फन्डिङको सफाइ समावेश गरिएको छ ।
साथै, युवा र सीमान्तकृत जनताको सशक्तीकरण गरी तिनको क्षमता र सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्ने पनि लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यही उद्देश्य हासिल गर्न बजेटले निम्न १० क्षेत्रमा जोड दिएको छ :
(क) किसानहरूको आम्दानी पाँच वर्षभित्र दोब्बर पार्ने कुरा चालू वर्षको बजेटमै राखिएकोमा यो वर्ष त्यसमा थप प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
(ख) ग्रामीण जनतालाई रोजगारी दिने र ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने ।
(ग) युवाहरूलाई शिक्षा र सीप प्रदान गरी रोजगारी दिने ।
(घ) विपन्न वर्गका जनतालाई दिइआएको सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नुका साथै उनीहरूलाई स्वास्थ्योपचार र आवास सुविधा उपलब्ध गराउने ।
(ङ) दक्षता, उत्पादकत्व र जीवनयापनलाई गुणस्तरीय पार्न पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने ।
(च) बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मजबुत पारी अर्थतन्त्रलाई स्थिरता र स्थायित्व प्रदान गर्ने ।
(छ) काम–कारबाहीलाई छिटो–छरितो पार्न र जवाफदेही तथा पारदर्शिता बढाउन अर्थतन्त्रलाई डिजिटाइज गर्ने ।
(ज) जनसहभागिताको माध्यमबाट प्रभावकारी शासन प्रणाली र सरकारी सेवासुविधा दक्षतापूर्वक उपलब्ध गराउने ।
(झ) साधनहरूको उच्चतम उपयोग÷प्रयोग गर्दै वित्तीय सन्तुलन र स्थिरता कायम राख्ने ।
(ञ) इमानदार करदाताहरूको सम्मान गर्ने कर प्रशासन बनाउने ।
यो नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न आर्थिक वर्ष २०१७/१८ मा कृषि कर्जाका निमित्त अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी रु. १० लाख करोड निर्धारण गरिएको छ ।
साथै किसानहरूले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको सहकारी संस्थाहरूबाट लिएको ऋणको दुई महिनाको ब्याज मिनाहाको राहत पनि पाउनेछन् । बाली बिमाको पहुँच आर्थिक वर्ष २०१७/१८ मा ४० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०१८/१९ मा ५० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न स्थापना गरिएको ‘दीर्घकालीन सिँचाइ कोष’ मा सरकारले उपलब्ध गराउने रकम २० हजार करोड थपेर ४० हजार करोड पु-याउने घोषणा गरिएको छ । त्यसैगरी ‘दूध प्रशोधन तथा पूर्वाधार विकास कोष’ स्थापना गरी सरकारले त्यो कोषमा तीन वर्षमा ८ हजार करोड रुपैयाँ जम्मा गरिदिने कुरा पनि बजेटले व्यक्त गरेको छ ।
साथै बजेटले २०१९ को अन्त्यसम्ममा १ करोड मानिसलाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने र ५० हजार ग्राम पञ्चायतहरूलाई गरिबीमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । २०१७ को मार्च महिनाभित्र देशको ग्रामीण क्षेत्रमा १० लाख कृषि पोखरी निर्माणको काम सम्पन्न भइसक्ने बताएको छ ।
यो कार्यक्रमबाट भारतको ग्रामीण क्षेत्रलाई सुक्खा मुक्त पार्न मद्दत पुग्ने भनिएको छ । ग्रामीण सडक निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २७ हजार करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसरी यो बजेटले त्यहाँका किसान, कृषि र ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा जोड दिई त्यहीबमोजिम बजेट पनि विनियोजन गरेकाले भारतीय कृषि उत्पादन कम लागतमा अरू बढ्ने भएको हुँदा त्यसबाट नेपालको कृषिक्षेत्रमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई रोक्न नेपालले प्रतिरोधात्मक कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।
त्यसैगरी आवासविहीन जनताका निमित्त सन् २०१९ भित्र १ करोड घर निर्माण गर्न २३ हजार करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । १ मई २०१८ भित्र देशका सम्पूर्ण गाउँहरूको विद्युतीकरण भई सक्ने कुरा पनि बजेटले घोषणा गरेको छ ।
आगामी वर्षभित्र ३ करोड ५० लाख युवाहरूलाई बजारको मागअनुरूपको सीपबाट प्रशिक्षित गरिने कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा गएर बच्चा जन्माउने गर्भवती महिलाको खातामा सरकारले रु. ६ हजार जम्मा गरिदिने घोषणा पनि गरेको छ ।
भारु ५ सय र १ हजारका नोटको अमौद्रीकरणबाट कालो धन उन्मूलनमा र नगदविहीन (क्यास्लेस) कारोबारमा जोड दिइएबाट राजस्व परिचालनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी अनौपचारिक अर्थतन्त्र औपचारिकमा रूपान्तरण हुने पनि अपेक्षा गरिएको छ ।
व्यक्तिगत आयकरका दरमा गरिएको परिवर्तन महŒवपूर्ण छ । वार्षिक अढाई लाखदेखि ५ लाखसम्म करयोग्य आय भएका करदाताहरूलाई लाग्ने आयकरको दर १० प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने ५० लाखदेखि १ करोडसम्म आय भएका करदातालाई १० प्रतिशत र १ करोडभन्दा माथि आय भएका करदाताहरूलाई १५ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाइएको छ ।
यसबाट तल्लो वर्गलाई राहत र उपल्लो वर्गलाई क्रमिक रूपमा कर दायित्व बढाई आयकर प्रणालीको प्रगतिशीलता बढाइएको छ । यसले आय असमानता घटाई सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन गर्नेछ ।
यसरी यो बजेट किसान, कृषि र ग्रामीण क्षेत्र र आवासविहीन जनताको उत्थान गर्न तथा सामाजिक सुरक्षाका साथै सामाजिक न्याय प्रवद्र्धनमा केन्द्रित भएकाले यो बजेटलाई दक्षिणपन्थी सरकारको वामपन्थी बजेट भन्नु उपयुक्त देखिन्छ ।